Ny zon'ny mpanenjika hanohitra ny neutralization - Raby Michael Avraham
Zon'ny mpanenjika hanohitra ny neutre azy
Responsa > Sokajy: Halacha > Zon'ny mpanenjika hanohitra ny neutre azy
fifaliana Nanontaniana 3 volana lasa izay
Moa ve raha misy mitzvah ho an'ny rehetra mba tsy hi-neutre ny mpanenjika dia misy mitzvah ho an'ny mpanenjika ny tenany tsy hanohitra ny neutralization? Sa ny mpanenjika dia mbola manan-jo hanohitra ny neutralization (ary hatramin'ny famonoana ny neutralizer)? Amiko dia tsy misy resaka momba izany ao amin'ny Lalàn'ny Mishnah Torah momba ny mpamono olona sy ny fiarovana ny fanahy, Toko A.
Tags fanontaniana: mpanenjika
mikyab Staff Voavaly 3 volana lasa izay
Miseho amin'ny mpihira izany raharaha izany. Nilaza ny Gemara fa raha nanongana sy namono an'i Pinchas avy amin'ny fanjakana manenjika izy dia ho afaka. Ary ao amin'ny Malam F.A. Mahal dia misy mpamono olona miresaka momba ny fanitarana an'io lalàna io (ahoana ny momba ny mpamono olona tsy nahy izay mamono ny mpamonjy ny rà, ary ny mamono ny iraka ao amin'ny andininy faharoa dia tsy maintsy resahina koa).
Ny mpanenjika dia tsy manan-jo hanohitra ny neutralization toy ny tsy manan-jo hamono olona. Raha ny marina, ny tenany dia tsy maintsy namono tena tamin'ny fanjakana manenjika (na mazava ho azy fa mijanona ny fanenjehana). Toy izao no nanazavako teto herinandro vitsy lasa izay ny lalàna fa ao amin'ny iraka ao BD dia tsy misy alalana hamono azy satria ny voampanga mihitsy no tsy maintsy mamono tena. Mitzvah apetraka amin'ny besinimaro ny famonoana jiolahy, ary iraky ny rehetra (anisan'izany ny enjehina) ny B'D messenger.